OMG: Waa la i tallaalay, mana garanayo waxa ku jira
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » OMG: Waa la i tallaalay, mana garanayo waxa ku jira
Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • Dadka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Maxaa ku jiray tallaalkayga?
COVID-19 si buuxda ayuu u soo noqonayaa. Inta badan dadka ku dhamaada ICU ama dhintaan waa kuwo aan la tallaalin.
Maqaalkani waxa uu u heellan yahay dhammaan inta u malaynaysa ANIGA.
Waa la i tallaalay oo maya, ma aqaano waxa ku jira - midna tallaalkan ama kuwii aan helay yaraantii, ama Big Mac ama eeyaha kulul.
Sidoo kale ma garanayo waxa ku jira ibuprofen ama dawooyinka kale, kaliya waxay bogsiisaa xanuunkayga.
Ma garanayo wax kasta oo ku jira saabuunteyda, shaambadayda, ama carfisyadayda.
Ma garanayo saamaynta fog ee isticmaalka moobilka.
Ma garanayo in cuntadii aan makhaayadda ka cunay lagu diyaariyey gacmo nadiif ah.
Ma garanayo in dharkayga, daahyada, cabitaanka isboortiga ay caafimaad darro yihiin.
Marka la soo koobo…
Waxaa jira waxyaabo badan oo aanan garanayn oo aanan weligey ogaan doonin.
Laakiin waxaa jira hal shay oo aan ogahay:
Noloshu waa gaaban tahay, aad bay u gaaban tahay, welina waxaan rabaa in aan sameeyo wax kale oo aan ahayn in "lagu xiro" gurigayga.
Weli waxaan rabaa inaan dadka isku duubo cabsi la'aan.
Yaraantii iyo markii aan qaangaaray, waxa la iga tallaalay dabaysha iyo cudurro kale oo badan. Aniga iyo waalidkay waxaan aaminay saynis, waligayna nama aan haleelin ama gudbin mid ka mid ah cudurrada la iga tallaalay.
Mar kasta oo aan baabuur wado, waxaan noloshayda u wakiishay kumanyaal shisheeye ah waxaanan rajaynayaa inay garabkooda sii ahaan doonaan.
Nolosheyda oo dhan way shaqeysay ilaa hadda!
Kalsooni la'aan, ma jirto nolol qiimo leh iyo jacayl ma jiro!
waa la i talaalay
La iima tallaalin si aan dawladda uga farxiyo.
Waa la i tallaalay sababtoo ah:
* Ma rabo inaan u dhinto Covid-19.
* Ma rabo inaan faafiyo Covid-19
* Waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo kuwa aan jeclahay
* Wali waxaan is tijaabinayaa si aanan u gudbin Covid
* Waxaan jeclahay inaan noolaado noloshayda.
* Waxaan jeclahay inaan Covid-19 ka dhigo xasuus hore.
* Waxaan rabaa inaan na ilaaliyo.
* Waxaan jeclahay inaan ilaaliyo kuwa aan awoodin, kuwaas oo ah saanqaadyadayada.
Waa la i tallaalay sababtoo ah waxaa jira cudurro kale oo halis ah oo laga yaabo inay u baahdaan daawaynta qaybta daryeelka degdegga ah, sida
shilalka, wadna xanuunka, kansarka
Waa la i tallaalay sababtoo ah waxaan jeclahay inaan u safro oo aan sahamiyo adduunka!
Dhammaanteen naga soo eTurboNews iyo Shabakadda Dalxiiska Adduunka!
Fadlan is tallaal!